Somalia:Ra’iisul Wasaaraha oo maanta qaabilay Ms Josette Sheeran-SAWIRRO | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > News, SOMALI NEWS, TFG Somalia, WFP	> Somalia:Ra’iisul Wasaaraha oo maanta qaabilay Ms Josette Sheeran-SAWIRRO
Somalia:Ra’iisul Wasaaraha oo maanta qaabilay Ms Josette Sheeran-SAWIRRO
Muqdisho, Khamiis, 21 July 2011 – Josette Sheeran oo ah Madaxa Guud ee Hay’ada Cuntada Adduunka (WFP) ayaa maanta ku soo booqatay Ra’iisul Wasaaraha Xafiiskiisa Muqdisho. Waa markii ugu horreysey oo ay Madaxa Guud ee Hay’ada Cuntada Adduunka soo gaarto magaalada Muqdisho, wallow ay bishii April soo gaartay magaalada Gaalkacyo.
Josette waxaa wehliyey Agaasimaha Geeska Afrika ee WFP iyo saraakiil sar-sare. Ra’iisul Wasaaraha waxaa ku wehliyey kulankan wasiiradii guddiga abaaraha iyo Guddoomiyaha Gobolka Banadir.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa u mahadceliyey Josette Sheeran imaatinkeeda magaalada Muqdisho, isla markaana siiyey warbixin la xiriirta xaaladda bani’aadanimo ee macluusha ah ee heysata shacabka soomaaliyeed. Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha waxuu ka warbixiyey sida Dowladdu ay bishii ugu danbeysey xoogeeda isagu geysey sidii gar-gaar deg-deg ah loola gaari lahaa shacabka soomaaliyeed iyo dadaalada aan kala go’a laheyn ee ka socda magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaaraha waxuu kaloo sheegay in dowladdu ay dib-u-dejin ku sameeyso barakacayaal gaaraya 4,000 oo loo diyaariyey hoy, biyo nadiif ah, iyo dhammaan gar-gaarkii ay u baahnaayeen. Ra’iisul Wasaare Cabdiweli waxuu kaloo sheegay in xaaladda abaarta ay mareyso heerkii ugu xumeyd oo shalay Qaramada Midoobey ay caddeeyeen inay shacabka soomaaliyeed heyso macluul aad iyo aad u daran.
Waxuuna ka codsaday WFP inay labo jibaaraan howlahooda quudinta iyo sidii shacabka tabaaleysan loogu heli lahaa gurmad deg-deg ah. Waxuuna sheegay in xaaladda ay mareyso heer loo baahanyahay gurmad maanta ah oo aan la sugi karin inta qorsheyaasha caadiga ah laga hirgelinayo.
Josette Sheeran, Madaxa Guud ee Hay’adda WFP ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsantahay inay la kulanto Ra’iisul Wasaaraha, sheegtayna in WFP ay ka go’antahay sidii gurmad deg-deg ah loola soo gaari lahaa shacabka soomaaliyeed.
Josette ayaa sheegtay in WFP ay hadda diyaarisay nafaqooyin wax weyn ka tari kara xaaladda oo dadka gaajeysan ay ku soo celineyso nafaqadii, waxeyn ballanqaaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan nafaqadan u gaarsiin doonaan dhammaan goboladda dalka gaar ahaan kuwa ay sida ba’an abaarahu uga jiraan.
WFP waxey si joogta ah cunno iyo nafaqo u gaarsin doonaan barakacayaasha ku sugan Muqdisho. WFP oo ka jawaabeysa codsiga Ra’iisul Wasaaraha waxey ballanqaadeen in isbedel cusub ay la iman doonaan taasoo laga dareemi doono xoojinta iyo kobcinta gar-gaarka bani’aadanimo.
Tags: Josette Sheeran, Mogadishu, Muqdisho, News, SOMALIA, Soomaaliya, United Nations, WORLD, World Food Programme
Somalia:Somali minister kidnapped – reports Somalia:Daawo Sawirrada Kulanka Madaxda Dalka iyo Wafdiga Q.M ee Maanta Muqdisho Yimid